AungWana - ဝန်ဆောင်မှု
ဝဘ်ဆိုက်ဆိုတာ ဝန်ထမ်းမလိုပဲ ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ ဆိုင်ခွဲတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအချက်တွေက ဝဘ်ဆိုက်ကတစ်ဆင့် ဝင်ငွေရစေနိုင်တယ် ဆိုကတော့ Website Company တိုင်းက မသိနိုင်သလို လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုလည်း ရနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မတူနိုင်ပါဘူး။ ဝဘ်ဆိုက်ကတစ်ဆင့် ဝင်ငွေရနိုင်စေဖို့ ကျနော်တို့ နဲ့. ယနေ့ပဲ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ အသက်သွင်းလိုက်ပါ။
မြန်ဆန်၊ လုံခြုံပြီး Storage နှင့် Bandwidth တို့ အကန့်အသတ်မရှိ ပေးထားသော cPanel Hosting များကို ဈေးနှုန်းသက်သာစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Gmail ဟာ လူတိုင်း အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်ကိစ္စတွေကို Gmail နဲ့ ပို့တဲ့အခါ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း၊ စာမပြန်ခြင်းတို့ကို ကြုံရတတ်ပါတယ်။ Webmail ကတော့ @gmail.com အစား @ကိုယ့်လုပ်ငန်းနာမည်.com နဲ့ ဖွင့်လို့ရတဲ့အတွက် ဘယ်လုပ်ငန်းက ပို့ကြောင်း တန်းသိနိုင်တဲ့အပြင် လုပ်ငန်းသုံး mail ဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှု မြင့်မားစေတဲ့အပြင် လုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပြီးသားလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။
Facebook ကြော်ငြာတစ်ခု စတင်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ ကြော်ငြာရှင်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို လေ့လာသုံးသပ်တဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းအဆင့်ကစလို့ ကြော်ငြာပြီးသည်အထိ ကြော်ငြာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အလေးထား ဆောင်ရွက်လို့ ထိရောက်မှု အမြင့်မားဆုံး ရရှိစေပါတယ်။
SEO ( Search Engine Optimization) ဆိုသည်မှာ လူကြီးမင်းရဲ့ website ကို Google search ပထမဆုံး စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပေါ်လာစေမယ့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တာကို ရှာတဲ့အခါတိုင်း လူကြီးမင်းရဲ့ Website က ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့အခါ လုပ်ငန်းရနိုင်ခြေ မြင့်မားတဲ့အပြင် လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှု၊ အထင်ကြီးလေးစားမှု လည်း ရရှိစေပါတယ်။
လိုဂို၊ အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟာ လုပ်ငန်းနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အရာပါ။ ဒါကြောင့် လိုဂိုဒီဇိုင်း အားနည်းတဲ့အခါ လုပ်ငန်းအပေါ် ယုံကြည်မှု နည်းမှာ အသေအချာပါပဲ။ လှပသေသပ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အဝပါတဲ့ လိုဂိုဒီဇိုင်းကောင်းတွေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်း တိုးတက်အောင်မြင်အောင် ကျနော်တို့ မှ ဝန်ဆောင်ပေးပါရစေ။
ကျနော်တို့က ဆွဲပေးတဲ့ လိပ်စာကဒ်တစ်ခုဟာ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေပါရုံထက် လူတိုင်း သိမ်းထားချင်မယ့် ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေးရတာ proud ဖြစ်စေမယ့် လိပ်စာကဒ်မျိုးတွေပါ။ အခုပဲကျနော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လိပ်စာကဒ်ဒီဇိုင်းကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
© Copyright AungWanaDesign. All Rights Reserved
Designed by AungWana.com